OUKITEL WP2 समीक्षा गर्नुहोस्, असीमित ब्याट्रीको साथ असभ्य एक | Androidsis
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | ब्याट्री, Oukitel, समीक्षा
एन्ड्रोइड्समा हामी सबै प्रकारका ग्याजेटहरूको साथ प्रयोग गर्न रोक्दैनौं। हालसालै हामी सबै प्रकारका सामानहरू प्रयोग गर्न सक्षम भएका छौं; स्पिकरहरू, चार्जरहरू, हेडफोनहरू ... तर यो कुरा स्पष्ट छ कि हामीलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा स्मार्टफोन हो। यो समय हामी नयाँ OUKITEL WP2 परीक्षण गर्न सक्षम भएका छौं.
एक पटक फेरि OUKITEL को हातबाट, र फेरि, एक रबिजडाइन्ड फोन। हामीले यसबारे केही अन्य अवसरमा उल्लेख गरिसकेका छौं, रुगिरिजाडो फेसनमा छन्, र उसको परिवार बढ्न बन्द गर्दैन। WP2 सँग पर्याप्त सुविधाहरू छन् उद्योगमा सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरूको सूचीमा उपस्थित हुन। अब यो अमेजनमा किन्नुहोस् यहाँ बाट नि: शुल्क शिपिंगको साथ उत्तम मूल्यमा
1 OUKITEL WP2 बजारमा अधिक ब्याट्रीको साथ असहज
2 यो OUKITEL WP2 हो
3 OUKITEL WP2 अनबक्सिंग
5 ठूलो स्मार्टफोनको लागि ठूलो स्क्रीन
6 हामी OUKITEL WP2 भित्र हेर्दछौं
7 Android .8.0.० Oreo केही ब्रशस्ट्रोकको साथ
8 बाँकीको उचाईमा फोटोग्राफी
9 क्यामेरा अनुप्रयोग र यसको सम्भावनाहरू
10 ब्याट्री दिन र लिनको लागि
11 ध्वनि र अतिरिक्त
11.1 थप जोड्नुहोस्
12 OUKITEL WP2 को "पेशेवरहरू" र "विपक्षहरू"
13 सम्पादकको विचार
OUKITEL WP2 बजारमा अधिक ब्याट्रीको साथ असहज
यो एक छ साझा गुणस्तर सबैको व्यावहारिक रूपमा OUKITEL फोनहरू। फर्मको साझा हलमार्क प्राप्त गर्ने उद्देश्यले, यसले यसको स्मार्टफोनहरू प्रदान गर्दछ धेरै उदार ब्याट्री त्यो सँधै ध्यान आकर्षित गर्दछ। The WP2 कुनै अपवाद छैन, वास्तविकताबाट केहि पनि अगाडि छैन, हामी स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन केहि पनि कम छैन 10.000 mAh ब्याट्री, एक पास।
तर जति ठूलो यो एक ठूलो ब्याट्री को रूप मा छ, यो न केवल एक मात्र चीज हो न त यस OUKITEL WP2 को बारे मा राम्रो चीज। हामी रुगरिजाडोको सामना गरिरहेका छौं जुनसँग OUKITEL ले सबै मासुलाई ग्रिलमा राखेको छ ताकि यो अन्य धेरै स्मार्टफोनको साथ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछ जम्मा बिना अन्य नामहरूको।
una १.6..XNUMX इन्च स्क्रीन, डुअल फोटो क्यामेरा, मेमोरी १२ जीबी र्यामवा GB 64 जीबी भण्डारण, निश्चित रूपमा विस्तार योग्य, हामी यो स्मार्टफोनमा विस्तृत रूपमा हेर्नको लागि पर्याप्त कारणहरू छन्। त्यो यो सबै को अतिरिक्त छ पानीमा पनडुब्बी, धुलो र झटके प्रतिरोधी। के तपाईलाई यस OUKITEL WP2 मा चासो लिन अझ बढी कारणहरू चाहिन्छ?
यो OUKITEL WP2 हो
नयाँ OUKITEL WP2 का भौतिक पक्ष हामीले बजारमा पाउन सक्ने बाँकी असहज व्यक्तिहरूसँग धेरै धेरै समान छ। ठूलो आकार, कोणीय आकारहरू, केहि अन्य धातु शीट, र स्क्रूको उपस्थिति। सबै एक को विकल्प को साथ संयुक्त बम प्रूफ सामग्रीहरू। हामी भेट्छौं Polystyrene Ebonite र लचिलो Polstyrene गोंद जसले यसलाई पानीबाट मात्र सुरक्षित गर्दछ, तर स्क्र्याचहरू र बम्पहरूबाट पनि। तर यसलाई भागहरूमा हेरौं।
मोर्चामा, यसको-इन्च स्क्रीन ठूलो आकार बाहिर खडा छ, जो सामने प्यानल को एक ठूलो हिस्सा कब्जा। यद्यपि यसले अझै पछाडि गिलासको अ inside्गमा फ्रेमहरू राख्दछ, उपकरणको शरीरको विशिष्ट फ्रेमहरू थप बाहेक। तल, हस्ताक्षर लोगो भन्दा माथिको माइक्रोफोन हो। र स्क्रिनको शीर्षमा हामी सेन्सरहरू, सेल्फी क्यामेरा र कलहरूका लागि स्पिकर भेट्छौं।
मा तल को कार्गो को लागी पोर्ट र कम्प्युटरमा जडान। यो समय यसको बारेमा हो USB प्रकार सी, नयाँ उपकरणहरूमा सराहना गरिएको केहि। OUKITEL WP2 चार्ज गर्न वा जडान गर्न सक्षम हुन हामीले A लाई हटाउनु पर्छ रबर ट्याब जसले उपकरण हर्मेटिक राख्नको लागि कार्य गर्दछ। हामीले भन्नुपर्दछ कि यो ट्याब सजिलै हटाउन सकिन्छ। अरु कवच स्मार्टफोनहरू जुन हामी यो साधारण कार्यको परिक्षण गर्न सक्षम भएका छौं अपेक्षामा अधिक जटिल थियो।
यहाँ OUKITEL WP2 पाउनुहोस् र नि: शुल्क शिपिंगको साथ home दिनमा यसलाई घरमा प्राप्त गर्नुहोस्
मा दायाँ पट्टि WP2 बाट हामी केहि तत्व फेला पार्छौं, हाम्रो रायमा, गलत ठाउँमा राखियो। माथि छ भोल्युम नियन्त्रणको लागि बटन। र बटनको ठीक तल लक वा अन / बन्द। सामान्य अवस्थामा अब सम्म सबै कुरा। तर फेरि हामी फेला पार्दछौं एक "प्रयोग" जुन अन्य अवसरहरूमा स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन भइसकेको छ कि यो सफल छैन।
OUKITEL WP2 रेखदेखहरू उपकरणको पक्षमा तपाइँको फिंगरप्रिन्ट रिडर"घर" बटनको ठीक तल। यस्तो ठूलो स्मार्टफोनमा पहिले सहज नहुने ठाउँ, र यदि हामी यसमा थप्दछौं भने एक फिंगरप्रिन्ट पढ्ने "गलत", झन् खराब। यो महत्त्वपूर्ण छ कि फिंगरप्रिन्ट रेकर्ड गर्दा हामी औँलालाई उही पट्टि राख्छौं जसमा हामी यसलाई स्मार्टफोनमा हातमा राख्छौं।
मा बाँया पट्टि, स्क्रूको साथसाथै हामी पनि दायाँ पट्टि फेला पार्दछौं, त्यहाँ छ कार्ड स्लट। हामी एक कार्ड सम्मिलित गर्न सक्छौं दुई सिम कार्डहरू, र मेमोरी कार्ड माइक्रो एसडी। यो स्लट, USB पोर्टको साथ अवस्थित छ रबर ट्याबको साथ सुरक्षित त्यसले पानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
La माथि फोन बाँकी छ पूरै चिल्लो। को निर्णय पोर्ट मेटाउनुहोस् हेडफोन इनपुट मिनी ज्याक, अधिक र अधिक उत्पादकहरूले गरेजस्तै यसले केही अंशहरू बटन वा पोर्टहरू खाली गर्दछ।
मा पछाडि OUKITEL WP2 को हामी फेला पार्दछौं डुअल क्यामेरा एक ठाडो स्थितिमा, यो स्मार्टफोनको एक ठूलो आकर्षण हो। A सेन्सर सामसु signedद्वारा हस्ताक्षर गरिएको त्यो प्रस्ताव गर्दछ १ + + २ मेगापिक्सल र परिणामहरू प्रस्तुत गर्न सक्षम छ जुन हामी तपाईंलाई पछि भन्नेछौं। क्यामेरा मेटल शीटमा राखिएको छ जुन आरामदायी तरीकामा बाँकी भन्दा भिन्न छ।
केवल तल, हामी फेला पार्दछौं धेरै मौलिक फ्ल्यास र अहिले सम्म थोरै देखिएको। यो एक को बारे मा छ चौगुना ठूलो एलईडी फ्ल्यास सबैभन्दा प्रोफेशनल क्यामेराको फ्ल्यासको शैलीमा सबैभन्दा गाह्रो दृश्यहरू रोशन गर्न सक्षम छ। हामीले यो परीक्षणमा राख्यौं र यो वास्तवमै अपेक्षित परिणामहरू भन्दा राम्रो छुटकारा दिन्छ।
को तल पछाडि तपाईको हो एक वक्ता। यो औसत भन्दा बढी शक्तिशाली हुन को लागी बाहिर खडा छैन, तर यो राम्रो शक्ति र विकृति बिना एक स्वीकार्य ध्वनि प्रदान गर्दछ।
OUKITEL WP2 अनबक्सिंग
यो हाम्रो "पवित्र" क्षणहरू मध्ये एक हो जब हामीले स्मारफोन पाउँछौं। WP2 को अनबक्सिंगमा हामी फेला पार्दछौं केहि अपेक्षित अनुपस्थिति र केही आश्चर्यहरू। हामीसँग हेरौं कि हामीले हालमा केही अतिरिक्त वा एक्सेसरीहरू भेट्टायौं जुन हामीसँग थिएन। तर यस पटक केही छैन।
बक्स खोल्दा हामी अग्रभूमिमा भेट्छौं, सामान्य रूपमा, स्मार्टफोन नै। त्यो पहिलो नजर मा बाहिर देखिन्छ grande, र एक पटक हामीले यसलाई बाहिर लियौं pesado। यो कुनै नवीनता होइन, "रूज फोनहरू" क्लन्की र भारी फोनहरू हुन्, र OUKITEL WP2 यसको अपवाद छैन।
हामीले भन्नु पर्छ प्याकेजि very राम्रो छ। A म्याट कालो बक्स। र यस भित्र अन्य साना बक्सहरू बाँकी कम्पोनेन्टहरू सहित। ती मध्ये एक हो चार्जका लागि कनेक्टर विद्युत् प्रवाहमा। पक्षमा एक कुरा यो छ कि आउँछ यूरोपियन ढाँचामा, केहि चीजहरू जुन यो तार्किक देखिन्छ सधैं सही हुँदैन।
र अर्को सानो बाकस भित्र हामी धेरै केबुलहरू फेला पार्दछौं। त्यहाँ छ USB केबल जस्तो कि हामीलाई युएसबीका लागि जडानको साथ थाहा छ प्रकार सी। हामीसँग पनि छ हेडफोन जडान गर्न एडाप्टर समान यूएसबी सी पोर्टमा, 3.5. XNUMX एमएम ज्याक कनेक्टरको अभावका कारण। र अन्तमा संग एक केबल के सेवा गर्दछ OUKITEL WP2 को बाह्य ब्याट्रीको रूपमा कार्य गर्नको लागि अन्य उपकरणहरूको लागि।
अरू केहि छैन, तर हो केहि कम, हेडफोन। हामी कहिले पनि यो थकित गर्दैनौं कि यो हुनुपर्दछ सहयोगी हुनु पर्छ। र यद्यपि हामी यसमा जोड दिन जारी राख्छौं, यस्तो लाग्छ कि यो उनीहरू बिना गर्नका लागि सामान्य अभ्यास भइरहेको छ।
स्क्रिन Inch इन्च LCD IPS6X 1080 FHD + Cनिंग गोरिल्ला ग्लास २
अधिसूचना एलईडी SI
प्रोसेसर मिडियाटेक MT6750
GPU एआरएम माली- T860 MP2
फिंगरप्रिन्ट यदि दायाँ पट्टि अवस्थित छ भने
रियर क्यामेरा डुअल सेन्सर स्यामसंग S5K2P7 को साथ १ + + २ Mpx को साथ
फ्रन्ट क्यामेरा सेन्सर गैलेक्सीकोर GC8024
ब्याट्री 10000 mAh
सफ्टवेयर Android Oreo 8
आयामहरू 85.0 एक्स 172.0 एक्स 13.0
मूल्य 289 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् OUKITEL WP2
ठूलो स्मार्टफोनको लागि ठूलो स्क्रीन
OUKITEL WP2 सुसज्जित आउँदछ एक उदार-इन्च स्क्रीन। केहि राम्रोसँग मिल्दछ जुन हामी फोनको आकारमा हेर्छौं। हामी पहिले नै अन्य असहज व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न सक्षम भएका छौं जुन or वा .6..5 इन्चको स्क्रीन आकार एकदम सानो थियो। यस अवस्थामा, स्क्रिन उपकरणमा राम्रो देखिन्छ।
हामीसँग एउटा छ IPS LCD क्यापेसिटिव स्क्रिन धेरै राम्रो संग रिजोलुसन, १ x० x २१1080० px, पूर्ण HD +। यो संग inch०२ पिक्सेल प्रति ईन्चको घनत्व र बहु ​​स्पर्श। र केहि चीज जुन हामी सँधै स्मार्टफोनमा पाउन चाहन्छौं अधिसूचना LEDs.
यद्यपि यो सम्भव छ पर्दाको सुरक्षा यसको कमजोर बिन्दु मध्ये एक हुन सक्छ। OUKITEL WP2 एक स्मार्टफोन हो जुन बजारमा दुई महिना भन्दा कम पहिले हिट भयो। त्यसकारण उनीहरूसँग सुरक्षा छ गोरिल्ला ग्लास2यो हालको संस्करण 6. को लागी जाँदै छ भने यसले खास अर्थ राख्दैन। अझ धेरै त्यसो त स्मार्टफोन भनिन्छ जुन तथाकथित सबै इलाका क्षेत्रमा अवस्थित छ।
El स्क्रीन प्रारूप १::: यो सम्भव छ यसको-इन्च आकार को लागी धन्यवाद। एक ढाँचा र आकार जुन हाम्रो मनपर्ने श्रृंखला मोबाइलमा पनि सहजै हेरेर बनाउँदछ। जस्तो कि हामी देख्न सक्छौं, स्क्रिनको सेक्सनमा सेतोको एक र अर्कोको बालुवाको छ।
हामी OUKITEL WP2 भित्र हेर्दछौं
हामी हेर्दै छौं कि कसरी मध्य-दायरा अधिक र अधिक पार गरियो। कुनै पनि उच्च-अन्त जस्तै शक्तिशाली नम्र हस्ताक्षर उपकरणहरू पाउन यो सजिलो छ। स्मार्टफोन जसले एक संतृप्त बजारमा राम्रो मूल्यमा उच्च प्रदर्शनको प्रस्ताव राखेर एक खुट्टा हासिल गर्न कोशिस गर्छन्। OUKITEL सँधै अन्य कम्पनीहरूको माथि ठ्याक्कै यसको कारणले ध्वनि गरिएको छ, र WP2 यसको उदाहरण हो।
"All-terrain" स्मार्टफोन खण्डमा, राम्रो मोहर प्रस्ताव गर्न पर्याप्त छैन। को OUKITEL WP2 IP68 प्रमाणित छ र आघात संरक्षण संग। तर यो बाहिर खडा बनाउन को लागी पर्याप्त छैन। यो धेरै अन्य पक्षहरूमा एक सक्षम स्मार्टफोन हुनुपर्दछ, र WP2 ले ध्यानमा राख्नुपर्ने धेरै कारणहरू प्रस्तुत गर्दछ।
यो छ MediaTek MT6750 प्रोसेसर, को एक चिप १. 1,5 GHz मा आठ कोरहरू चलिरहेका छन् स्पष्ट रूपमा विरोधाभास गरिएको छ र यसले ओप्पो, Asus, ZTE वा Ulephone जस्ता फर्महरूमा राम्रो परिणाम प्रस्ताव गरेको छ। यसले उपकरणलाई विश्वसनीयताका साथ प्रवाह गर्दछ र कुनै कार्य प्रदर्शन नगरीकनै र कुनै पनि गेम खेल्दै। हामी शक्ति हराउँदैनौं, र हामी पनि अत्यधिक तातो देख्ने छैनौं।
राम्रो प्रोसेसर मापन गर्नका लागि राम्रो राम्राको समर्थन हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ। OUKITEL WP2 छ १ जीबी र्याम मेमोरी, जुन पूर्ण रूपमा क्षमताको साथ पूरक हुन्छ G 64 जी आन्तरिक भण्डारणB. यस स्मार्टफोनका लागि पर्याप्त संख्याहरू भन्दा बढि आश्चर्यजनक कार्य गर्न, र हामी यो प्रमाणित गर्छौं कि यो गर्छ।
र लिंकलाई अत्यन्त सभ्य हार्डवेयर खण्डमा राख्दै हामी हेर्छौं GPU। हामी WP2 परीक्षण गरेर गुणवत्ता ग्राफिक्सको मजा लिन सक्षम भएका छौं। र यो धन्यवाद एआरएम माली- T860 MP२, पर्याप्त अनुभवको साथ एक ग्राफ धेरै राम्रो नतीजा प्रस्ताव गर्न सक्षम छ।
Android .8.0.० Oreo केही ब्रशस्ट्रोकको साथ
हामीले यो भनेको छ र यसलाई धेरै पटक दोहोर्याइएको छ, हामी एन्ड्रोइडलाई मनपर्दछौं। एक मद्दत जस्तै काम गर्दछ एक अझ राम्रो अपरेटिंग प्रणाली। र कहिलेकाँही अनुकूलन को केही असहज लेयरको कारण यो ढिलोपनबाट ग्रस्त हुन्छ। त्यहाँ फर्महरू छन् कि एन्ड्रोइडलाई आफ्नैमा "मोल्ड गर्नुहोस्", र एक आकर्षक उत्पाद प्रस्ताव गर्न प्रबन्ध गर्नुहोस्। यसको स्पष्ट उदाहरण MIUI हो, शाओमीको आफ्नै लेयर।
OUKITEL WP2 मा हामी सफा एन्ड्रोइड फेला पार्न सक्दैनौं। तर हामीले उसको पक्षमा भन्नु पर्छ, त्यो अनुकूलन तह न्यूनतम आक्रामक हो। यो धातुको किनारहरूको केहि आईकनहरू भन्दा बढी जान सक्दैन। हामीले पनि भेट्टायौं "उपकरण केस" बिभिन्न अनुप्रयोगहरूको साथ जुनaको रूपमा उपयोगी हुन सक्छ कम्पास, संयुक्त राष्ट्र स्तर, र अन्य मापन गर्न।
टाँसेको रूपमा हामी त्यसलाई मेनुमा थप्न सक्दछौं, केहि फ्याक्ट्री अनुप्रयोगहरूमा हामीले भेट्टायौं केहि सेटिंग्स जुन उत्तम मन्डारिन चिनियाँमा छ। केहि महत्त्वपूर्ण छैन, तर यो सानो अनुवाद त्रुटि जस्तो देखिन्छ जुन पक्का भविष्यको अद्यावधिकहरूमा सुधार गर्न सक्षम हुनेछ।
के यसले तपाईलाई पहिले नै विश्वास दिलाएको छ? यहाँ तपाईं अमेजनमा OUKITEL WP2 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो मूल्य
बाँकीको उचाईमा फोटोग्राफी
हामी OUKITEL WP2 को फोटोग्राफिक सेक्सनमा आइपुगेका छौं। हामीले हेर्‍यौं यो सेक्सनमा, सबै इलाकाका स्मार्टफोनहरू धेरै विकसित भएका छन्भाग्यवश। सुरुमा, फोनको यस प्रकारको आघात र पानी प्रतिरोधात्मक हुन को लागी मनाइएको थियो। कडाई र प्रतिरोध मा यसको मुख्य विशेषताहरु को एक ठूलो हिस्सा फोकस गर्दै।
तर स्मार्टफोन बजार भित्र सबै क्षेत्रहरु जस्तै यो एक पनि विकसित भएको छ। सब भन्दा धेरै पहिचान गर्ने पक्षहरुमा अझ सुधार गर्नुका साथै हामी देख्छौं कि निर्माणकर्ताले कसरी बढि अनुदान दिन्छन् फोटोग्राफी जस्ता पक्षहरूमा बढी महत्त्व। केहि चीज जसले केवल यी विशेष स्मार्टफोनहरूमा थप गर्दछ।
यस अवस्थामा यो देख्न पाउनु शुभ समाचार हो OUKITEL WP2 लाई डुअल क्यामेराले सुसज्जित छ। थप रूपमा, सन्तोषजनक परिणामहरू सुनिश्चित गर्न तिनीहरूले बीमामा शर्त राखेका छन्। यसरी हामी कसरी दुबै देख्छौं डुअल सेन्सर पछाडिको क्यामेरा जस्तै फ्रन्ट क्यामेरा सेन्सर द्वारा हस्ताक्षर गरीएको छ Samsung.
मा रियर क्यामेरा हामी संग १ me मेगापिक्सलको आइसोसेल सेन्सर, the सामसु S S5K2P7। हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ फोकल अपर्चर २.० आईएसओ १०० - १2.0०० को साथ। र यो सेन्सरले पूरक हो २ मेगापिक्सल सेकेन्डरी। सँगै तिनीहरू महान परिणाम प्रदान गर्न सक्षम एक दोहरी क्यामेरा गठन।
En दिनको फोटो राम्रो प्रकाशमा हामी साँच्चिकै राम्रो परिणामहरू देख्छौं। को रंग परिभाषा एक धेरै राम्रो स्तर मा छ एक धेरै यथार्थवादी रंग gamut संग। र आकार को परिभाषाsy बनावट योसँग राम्रो क्यामेराको ईर्ष्याको केही पनि छैन।
यदि हामी गोली हौं भने परिदृश्य, हामी पनि प्राप्त टाढाको वस्तुहरूमा पनि राम्रो शार्पनेस। यद्यपि एक अव्यक्त जब म ठूलो बनाउँछ गुणवत्ताको हल्का घाटाs पकड। समग्रमा, OUKITEL WP2 क्यामेरा प्रतिस्पर्धी र कुनै पनि परिस्थिति संग राख्न सक्षम छ।
क्यामेरा अनुप्रयोग र यसको सम्भावनाहरू
क्यामेरा अनुप्रयोगमा हामी फेला पार्न सक्षम भएका छौं अपेक्षित भन्दा कम कन्फिगरेसनहरू। हामी भन्दैनौं कि यो एउटा अपूर्ण अनुप्रयोग हो, किनभने हामीलाई चाहिने सबै थोक छ। तर यसले प्रस्ताव गर्ने विकल्पहरू पनि आधारभूत छन्। तपाईं प्रकार चयन गर्न सक्नुहुन्छ २० वा bu० बर्स शुटिंग शटहरू प्रति सेकेन्ड।
हामी पनि छनौट गर्न सक्छौं फोटो आकार रिजोलुसनको अधिकतम पिक्सलहरू चयन गर्दै। वा बाट चयन गर्नुहोस् बिभिन्न मोडहरू फोटोले यसलाई प्रस्ताव गर्दछ। ती मध्ये हामी भिडियो, अनुहारको सौन्दर्य, प्रसिद्ध ब्लर प्रभाव (यहाँ "ब्लर" पनि भनिन्छ) कालो, सेतो, वा मनोरमको साथसाथ फेला पार्दछौं।
र हामी पनि बीच चयन गर्न सक्छौं आठ विभिन्न फिल्टरहरू कि हामी क्यामेरामा शूटिंग गर्नु अघि पनि आवेदन दिन सक्छौं। हामी यो देख्न सक्दछौं कि फोटो लिनु अघि यो कस्तो देखिन्छ। विकल्पको अभाव छैन, तर हामी भन्छौ, कन्फिगरेसनको पहुँच केही अपूर्ण छ।
हामी फोटोग्राफी सेक्सन बेवास्ता गर्न सक्दैनौं शक्तिशाली--LED फ्ल्यास WP2 छ जो संग। कल सुपर पावर एलईडी फ्ल्यासलाइट यो तपाईको स्मार्टफोनमा पाउन सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली फ्ल्यास हो। यो पूर्ण अन्धकार को स्थिति मा पनि तपाईंको फोटो लाई प्रकाश दिनेछ। अरु के छ त, एक शक्तिशाली फ्ल्यासलाइट को रूप मा डबल्स हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं यदि ब्याट्री स्तर%% भन्दा कम छ भने। यस्तो यसको शक्ति हो कि यसको निर्माताले आँखामा सीधा लक्ष्य नराख्न सल्लाह दिन्छ।
ब्याट्री दिन र लिनको लागि
ब्याट्री हो OUKITE को एउटा चिन्ह होएल। धेरै अन्य ब्रान्डहरू बीच ज्ञात छ यसको उपकरणहरू उदार ब्याट्रीहरूको साथ प्रदान गर्दछ जुन महान स्वायत्तता प्रस्ताव गर्दछ। र OUKITEL WP2 कुनै अपवाद छैन। हामी एकको सामना गरिरहेका छौं विशाल १०,००० mAh ब्याट्री। एक लोड जुन अन्य उपकरणहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको पनि तीन गुणा छ।
यो जान्नु राम्रो हुन्छ कि यस्तो क्षमता हुनुको साथै, छिटो चार्ज टेक्नोलोजी छ, त्यसैले हामी आनन्द लिन सक्छौं १० घण्टा ब्याट्री जीवन दुई घण्टा भन्दा बढीमा। र निर्माताले प्रस्ताव गरेका तथ्या seeing्कहरू हेरेर, यो मागको गतिलाई अनुसरण गर्न सक्षम स्मार्टफोनको खोजी गर्नेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण विकल्प हुन्छ।
OUKITEL दाबी गर्दछ कि WP2 को ब्याट्री छ days२ दिनको स्ट्यान्डबाई समात्न सक्षम। यो पनि समर्थन गर्दछ Hours० घण्टा फोन प्रयोग। सम्म भिडियो प्लेब्याकको १ hours घण्टा कुनै रुकावट बिना। OR Hours 66 घण्टा संगीत बजाउँदै निरन्तर। निस्सन्देह केहि चीज जुन अन्य उपकरणहरूको लागि विज्ञान कल्पना जस्तै लाग्न सक्छ। यस्तो देखिन्छ कि हामी बाहिर चार्जरको बारेमा चिन्ता नगरी बाहिर सप्ताहन्तमा मज्जा लिन सक्दछौं।
हामीले सँधै यस प्रकारको उपकरणमा राखेका थोरै त्रुटिहरू मध्ये एउटा हो ट्याब हटाउन कठिनाई जसले कनेक्टरलाई सुरक्षित गर्दछ लोड हुँदैछ। यो बुझिन्छ कि यो त्यहाँ पानी राख्नको लागि महत्वपूर्ण काम गर्नु हो। तर हामी यसलाई चार्ज गर्न वा जडान गर्न प्रत्येक पटक यसलाई हटाउन असुविधाजनक हुन्छ। आदर्श वायरलेस चार्जिंग हुनेछ र पक्कै पनि, एक वायरलेस चार्जर।
ध्वनि र अतिरिक्त
ध्वनी सेक्सनमा, OUKITEL WP2 tiptoe मा थोरै जान्छ। कमसेकम पावर र बाह्य ध्वनिको सर्तमा। यो संग एक वक्ता जुन पछाडि अवस्थित छ। एक स्थान जुन हामीलाई उचित लाग्दैन। फोन टेबलमा आराम गर्दा आवाज अलिकता मैला हुन्छ, र यदि हामीसँग यो हाम्रो हातमा भिडियो हेरिरहेको छ भने यसलाई पूर्ण रूपमा कभर गर्न सजिलो हुन्छ।
को लागी ध्वनि गुणस्तर र शक्ति यसले न्यूनतम मापदण्डहरू पूरा गर्दछ त्यसैले हामी यो गल्ती गर्न सक्दैनौं। हामी वास्तवमै यो हेर्न चाहन्छौं कि OUKITEL ले एक थप्नको लागि छनौट गरेको छ एफएम रेडियो रिसीभर। तर उस्तै तरिकामा हामीले कानमा थप्पड दिनु पर्ने हुन्छ किनभने एन्टेनाको रूपमा कार्य गर्न हामीसँग आवश्यक हेडफोन छैन।
यो पनि उल्लेखनीय छ, हामीले सुरुमा उल्लेख गरेझैं Mm. mm मिमी ज्याक इनपुट सप्रेस। यद्यपि हामी कुनै पनि हेडसेट धन्यवाद एक एडेप्टरमा जडान गर्न सक्छौं जुन USB प्रकार सी पोर्टसँग उपयुक्त छ। हामी फोन चार्ज हुँदा संगीत सुन्न बिर्सन सक्छौं। यस्तो देखिन्छ कि निर्माताहरूले हामीलाई ब्लुटुथ हेडफोन लिन "बल" दिएका छन्। अझ बढि यो जब हामी तिनीहरूको पोर्टमा सुरक्षा र कभरहरू सहित यस प्रकारको फोन प्रयोग गर्दछौं।
यद्यपि हामीले ध्वनि सेक्सनमा केही साना कमजोरीहरू उल्लेख गरिसकेका छौं, OUKITEL WP2 का केही अतिरिक्तका लागि धन्यवाद, यी क्षतिपूर्ति हुन्। यो एक महत्वपूर्ण टेक्नोलोजी जससँग यो सुसज्जित छ WP2 NFC जडान हो। केहि चीज जुन यो नयाँ होइन धेरै उत्पादनकर्ताहरू समाहित गर्न अनिच्छुक छन्। र यो भएकोले उपकरण धेरै अधिक पूर्ण र बहुमुखी बनाउँछ।
निस्सन्देह, हामी त्यसलाई वेवास्ता गर्न सक्दैनौं हामी एक "रुज फोन" को सामना गर्दै छौं, तर यो छ IP68 प्रमाणीकरण। असहज स्मार्टफोनको सबै निर्माताहरूले "पनडुब्बी H2O" मा भरोसा गर्न हिम्मत गर्दैन। आशयको घोषणाaमा आधारित छ डेढ मिटरसम्म पानीमा डुबाउन ग्यारेन्टी गरिएको प्रतिरोध। धूलो र झटकेहरूको प्रतिरोध गर्नुका साथै। निस्सन्देह एक महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त जसले हामीलाई अन्य साना कमीहरू भुल्छ।
OUKITEL WP2 को "पेशेवरहरू" र "विपक्षहरू"
यो हामीलाई समय मन पराउने कुरा हो जुन हामीले सबैभन्दा धेरै मन पर्यौं, र ती पक्षहरू जुन हाम्रो विचारमा सुधारको लागि ठाउँ छ। हामीले WP2 को पक्षमा भन्नु पर्छ यो छ सन्तुलित स्मार्टफोन। किनकि यसले सम्भावित कमजोरीहरू वा अन्य शक्तिहरूका साथ कमजोरीहरूको लागि क्षतिपूर्ति दिन्छ। त्यसकारण, सामान्यमा राय सकारात्मक छ, तर सधैं जस्तो, केहि भागहरूमा सुधारको लागि ठाउँ।
La iP68 प्रमाणीकरण यो यस्तो चीज हो जुन हामी अलि टेर्रेन स्मार्टफोनमा हेर्न आशा गर्दछौं, जुन हामीले देख्यौं कि सबैमा यो छैन।
पक्कै पनि विशाल १०,००० एमए ब्याट्रीh जससँग यो गणना गरिन्छ। एक आकृति जसले OUKITEL WP2 रबड फोनलाई बजारको सबैभन्दा ठूलो ब्याट्रीको साथ बनाउँदछ। OUKITEL को पक्षमा पोइन्ट गर्नुहोस्।
La NFC जडान, यस्तो चीज जुन धेरैका लागि ध्यान नदिई जान्छ, अरूका लागि यो आवश्यक गुण हो, हामी फोनहरू दिन सक्ने उपयोगिताहरूमा निर्भर हुन्छ। र यो हुनुले बहुमुखी प्रतिभाको पक्षमा सकारात्मक पक्षहरू थप्दछ।
१०,००० mAh ब्याट्री क्षमता
El उच्च तौल र ठूलो आकार यस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू यी प्रकारका फोनहरूमा निहित छन्, यद्यपि हामीले ज्यादै कम मात्रामा देख्यौं। यद्यपि शारीरिक पक्ष बजारको यस क्षेत्र मा यति धेरै गणना गर्दैन, यो एक तरफ छोड्नु राम्रो हुँदैन।
La Mm.mm मिमी मिनी ज्याक पोर्ट हटाउने आज पनि यो असफलता जस्तो देखिन्छ। केहि महत्वहीन हुन्छ कि जब एक निर्माता वायरलेस हेडफोन जोड़ेर क्षतिपूर्ति गर्न हिम्मत।
El फिंगरप्रिन्ट रिडरs हामीलाई यो दुई कारणले मनपर्दैन। हामीaको कुरा गरेर शुरू गर्दछौं पूर्ण रूपमा गलत स्थान। तर नकारात्मक बिन्दुहरू अधिक हुन्छन् जब हामी एक कमजोर कार्यक्षमता प्रमाणित गर्दछौं। वास्तवमा केहि पटक सहि पाउनुहोस् सहि पठनको साथ। धेरै अभावी उपस्थिति।
उच्च तौल र आकार
हेडफोन मिनी ज्याक दमन
गलत ठाउँमा राखिएको र गलत फिंगरप्रिन्ट रिडर
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » समीक्षा » समीक्षा OUKITEL WP2, असभ्य ब्याट्रीको साथ असभ्य एक